६ तला माथिबाट खसे ३ वर्षका बालक तर केही भएन ! भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाईरल, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – " कञ्चनजंगा News "
६ तला माथिबाट खसे ३ वर्षका बालक तर केही भएन ! भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाईरल, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
No Comments on ६ तला माथिबाट खसे ३ वर्षका बालक तर केही भएन ! भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाईरल, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
चीनको चोन्किङमा तीन वर्षीय एक बालक एउटा भवनको छैटौं तलाबाट खसेको भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनेको छ । छैटौं तलाबाट खसेपनि उनलाई केही भएन ।
प्रहरीका अनुसार घटना हुँदा उनी घरमा एक्लै थिए । एक जना प्रत्यक्षदर्शी महिला जु यानहुईले भनिन्,‘मैले एउटा बच्चा त्यहाँ माथि झुण्डिएको देखें । पहिला मलाई समाउन मिल्ने सामान खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । म खाली हातले उनलाई समाउन सक्दिनथें ।’
भवनमा बस्ने मानिस र कर्मचारीले ती बालकलाई एउटा ठूलो कम्बलमा थापे । सबै मानिसले माथिबाट खस्दै गरेको बच्चालाई हेर्दै कम्बललाई समाते । उनी माथिबाट खसे । र कम्बलमा परे । त्यसपछि एकजना छिमेकीले बच्चालाई अस्पताल लगे । ती तीनवर्षे बालकलाई कुनै चोटपटक भने लागेन । हेर्नुहोस् भिडियोः
यो पनि हेर्नुहोस – नेपाल टेलिकम- न्यूनतम प्याकेज रकमबाट महिनाभरी मोबाइलमा असीमित कुराकानी गर्न सकिने
१६ सय रुपैयाँको संस्थागत प्याकेजमा ७ सय ५० मिनेटसम्म समूहमा आबद्ध नभएका कम्पनीकै अरु फोन वा मोबाइलमा कुराकानी गर्न, २७ सय एमबी डाटा चलाउन र २ सय ५० वटा एसएमएस पठाउन सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा ५० मिनेट कुरा मिल्ने टेलिकमले जनाएको छ ।
← पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुन ! बि.स.२०७६ साल साउन १७ गते शुक्रबार, आज तपाइँको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल → नेपाल टेलिकम-न्यूनतम प्याकेज रकमबाट महिनाभरी मोबाइलमा असीमित कुराकानी गर्न सकिने